Covid lockdown – Zim COVID-19 Information Hub
Zim COVID-19 Information Hub > Covid lockdown
Zimbabwe’s Covid-19 lockdown restrictions cripple vendors
By Nyaradzo Nyere Sixty-five-year-old Naume Muchemwa from Harare’s Southlea Park suburb wakes up daily at 4am to catch the first bus to the city’s busiest fresh produce market. For more than 10 years, Muchemwa has been a vendor, selling fruits…
Zimbabwe’s informal traders’ battle for survival amid Covid lockdowns
By Bernard Mpofu Its 15:30hrs and several people can be seen in a beeline coming out of a popular supermarket in Harare’s Mabelreign suburb. Some look dejected after they were turned away because the supermarket was closing for the day…
Zimbabwe’s prolonged lockdowns hit the self-employed hard
By Nyaradzo Nyere On a normal school day Felix Mauwa wakes up early in the morning to pick school children. Mauwa (70), a retired bus driver, drops the children off at various schools in Harare and waits for them to…
Gender based violence worsens in Zimbabwe amid Covid-19 lockdowns
By Nyaradzo Nyere Melensia fears that she might have suffered permanent injuries from the routine beatings by her husband, which worsened when a lockdown was imposed to slow down the spread of Covid-19 in Zimbabwe last year. Gender rights activists…
By Bernard Mpofu Zimbabwe has put districts near its border with Zambia under a strict lockdown following a surge in Covid-19 infections in the past few weeks. Kariba and Hurungwe in Mashonaland West Province have become new Covid-19 hotpots amid…
Covid-19 lockdowns to push HIV mother-to-child transmissions
By Bernard Mpofu A prominent Aids activist has warned that Zimbabwe is in danger of recording a reversal in gains made in the fight against the mother-to-child-transmission of HIV due to Covid-19 lockdown restrictions. Tendayi Westerhof, the national coordinator for…